Ulwaphulo-mthetho nkqo ekukhuseleni ilungelo abaqondisi-mthetho, Umthetho Firms kwi-China kuba Wonke Isixeko - Abaqondisi-mthetho ka-China. Zonke Isitshayina abaqondisi-mthetho kwi-intanethi.
Abaqondisi-mthetho ka-China. Zonke Isitshayina abaqondisi-mthetho kwi-intanethi.
Ulwaphulo-mthetho nkqo ekukhuseleni ilungelo abaqondisi-mthetho, Umthetho Firms kwi-China kuba Wonke Isixeko
Armstrong Teasdale iguqulelwe kwi-China ukusukela ngowe
Ulwaphulo-mthetho nkqo ekukhuseleni ilungelo umthetho iqulathe isemthethweni protections afforded ukuba abantu ababekho umtyholwa of committing a ulwaphulo-mthethoIi-arhente ezinyanzelisa umthetho kwaye urhulumente abatshutshisi kuba kofakwano zokusebenza ngomhla wabo nokungcwatywa.
Ngaphandle sanele protections kuba umtyholwa, ukulingana amandla ngaphakathi ubulungisa indlela ebeya kuba skewed abaxhasayo urhulumente.
Njengoko kunjalo, elifanelekileyo unyango kuba, ulwaphulo-mthetho defendants rhoqo kwiimeko njengoko kakhulu phezu ubuchule babo nkqo ekukhuseleni ilungelo lamagqwetha njengokuba kubhaliwe ngaba substantive protections equlathwe emthethweni. Boase Cohen Collins waba waseka yi-Melville Boase kwaye Colin Cohen ngowe.
Ukususela ngoko, kuya kuba sele ndivuma kakhulu yamiselwa njengoko ephambili elizimeleyo ngokupheleleyo-nkonzo Umthetho Ifemi equipped nge-Hong Kong ulwazi yehlabathi khona.
Polished kwaye elinolwazi, ifemi ke accomplished iqela leengcali.
Umthetho Ifemi ke Isixhosa Umthetho-Ofisi Ubhenjamin Luo ngu ukuthengisa igama Umnu Luo ke practice inkqubo esemthethweni igama lakhe Umthetho Ifemi ubizwa ngokuba i-shanghai Kaizheng Umthetho Ifemi ("Kaizheng").
Ebekwe kwi-i-shanghai, China, ifemi inika uluhlu neenkqubo zomthetho iinkonzo domestic ngamazwe abaxhasi kwi kwiindawo zoshishino corporate oshishino. Umthetho Ifemi ke i-shanghai Dongzuo Umthetho Ifemi ngu epheleleyo-nkonzo private lwahlulelwano Umthetho Ifemi ebhalisiweyo ukuba amanqaku kwi-i-shanghai, Abantu ke Republic of China. Ifemi ke senzo kwiindawo kuquka ushishino eyenziweyo ezifana iinqwelo-mali, mergers kwaye acquisitions, yeshishini restructuring, ukwakhiwa. Umthetho Ifemi ke Furong Umthetho Ifemi ibonelela ngenkxaso isemthethweni iinkonzo ukusuka kwi-ofisi Guangzhou kwaye Shenzhen. Thina adhere to imicimbi yayo kwaye isiseko iinkonzo zethu kwi-imigaqo ingqiqo, ukugqwesha, teamwork, kwaye uxanduva. Isemthethweni amasebe ka-Furong Umthetho Ifemi kuquka Urhulumente Isemthethweni. Ezinye ii-Ofisi: Changsha, Shenzhen Umthetho Ifemi ke Credit Amakhadi Tianjin Bozhuan Umthetho Ifemi ifumaneka Tianjin, China.
I-groundwork wenziwe ngokomgaqo-kuba omnye century
Kwiminyaka yokugqibela-decade, bethu highly talented abaqondisi-mthetho kufuneka linike isemthethweni iinkonzo kuba amawaka labathengi, ranging ukusuka multinational amakhulu, igesi ne-oli iiprojekthi, iinqwelo-mali kwi-non-inzuzo organizations, urhulumente. Umthetho Ifemi u-China Umthetho Inkonzo (Wuhan) Limited yi reputable Umthetho Ifemi iphepha-mvume ukubonelela isemthethweni kwaye kokubonisana iinkonzo kwi-China. Yethu esemthethweni iqela ingaba i-ubunzulu ukuqonda kwaye ulwazi jonga isemthethweni inkcubeko kunye kwimakethi dynamics. Kunye ngaphezu amabini iminyaka engama-practicing umthetho kwi-China, bethu. Umthetho Ifemi ke MC Umthetho Ifemi ngu esekelwe kwi-China eyaziwa ngaphambili njengoko Miguel Cravo Umthetho Ifemi. Ifemi lusekiwe kwi-China ukusukela ngo- kwaye wenziwe ekuboneleleni kakhulu kofakwano umqolo neenkqubo zomthetho iinkonzo ngqo ngamazwe abaxhasi. Iinkonzo zethu-phantsi kwiindawo ezifana Finance Bank, yokusasaza ngeenjongo zokurhweba. Umthetho Ifemi ke Isixhosa Diaz Reus, LLP yi Miami-headquartered yehlabathi isemthethweni senzo focused kwi-national ngamazwe kunye ize eyenziweyo kwi-eziliqela senzo iindawo. Yethu esemthethweni iqela kuquka Ibhodi Eziqinisekisiweyo abaqondisi-mthetho kwi-ngamazwe, ulwaphulo-mthetho, immigration umthetho. Umthetho Ifemi ke Isixhosa Amanqaku i-shanghai ngu-China ke, oyena isixeko embindini of commerce kwaye iimali.
Umthetho Ifemi ke Isixhosa Curtis evuliweyo yayo Beirut-ofisi ebutsheni ukubonelela isemthethweni ngeenkonzo kubathengi bethu zokusebenza okanye ebekwe kwi-China kwaye Mpuma Asia.
I-Beirut-ofisi elinganayo ngokusondeleleneyo kunye ifemi ke, ezinye ii-ofisi e-United States, European Union, isilatini Emelika, Kumbindi Mpuma kwaye Central. Umthetho Ifemi ke Isixhosa America Ellis LLP, yehlabathi Umthetho Ifemi, ingaba i unyaka imbali ekuboneleleni exceptional inkonzo abaxhasi jikelele ehlabathini kwi-complex litigation, corporate kwaye irhafu, intellectual property, restructuring kwaye counseling imicimbi. Ezinye ii-Ofisi: Hong Kong, i-shanghai Umthetho Ifemi ke Isixhosa Orrick owes yayo reputation ukuya uphawu, imfezeko, nako, kwaye entrepreneurial umoya yayo abaqondisi-mthetho kunye nabasebenzi, iqala nge-founders Jarboe, Goodfellow, Eells, kwaye Orrick, kwaye siqhubeke namhla. Zethu iinkalo zobuchule kwi-public finance and corporate umthetho izikhondo ukususela seminal. Ezinye ii-Ofisi: Hong Kong, i-shanghai Umthetho Ifemi ke Isixhosa R P China abaqondisi-mthetho yi boutique PAPER Umthetho Ifemi ukuba ixhasa ngamazwe ishishini kwi-China.
Sidibanisa kwi-ubunzulu isemthethweni iinkalo zobuchule kwaye ngokubanzi amava i-Isitshayina ishishini-bume kunye keen ukuqonda iimfuno zethu abaxhasi.
Wanikela ukuba ukugqwesha, reliability, loyalty. Ezinye ii-Ofisi: Beirut, Ningbo, Qingdao Umthetho Ifemi ke Isixhosa E Reed Smith thina ngokwenene bakholelwa ukuba 'ke ayisosine nje ishishini. Ke lobuqu Sisebenzisa umphezulu yehlabathi Umthetho Ifemi ukuba sele isebenza kwi-vala lwahlulelwano kunye yayo abaxhasi kulo lonke a ngempumelelo -unyaka imbali ukukhula ukusuka ekubeni ephambili wesizwe Umthetho Ifemi ukuya transatlantic Umthetho Ifemi. Umthetho Ifemi ke Isixhosa Uvinson Elkins L. ufumana i-global Umthetho Ifemi practicing kwi-enyanisweni zonke kwiindawo zasekuhlaleni umthetho kwaye abanye kwiindawo mhlophe collar wolwaphulo-mthetho. Umthetho Ifemi ke Isixhosa Baker Botts ufumana i-wamazwe ngamazwe Ifemi lunxulumano kuba zethu creative indlela i-isemthethweni kwaye ishishini imiba iyonela kububanzi bephepha abaxhasi bethu.
Umsebenzi senza rhoqo groundbreaking.
Kunye nama- abaqondisi-mthetho kwaye kwihlabathi liphela womnatha ka-ofisi, Baker Botts imisebenzi kunye zethu abaxhasi qho. Ezinye ii-Ofisi: Hong Kong Umthetho Ifemi ke Isixhosa Davis Polk sesinye ihlabathi ke, inkulumbuso Umthetho Firms. Ezaziwayo kuba zethu skillful umsebenzi highly complex imicimbi asele kakhulu kubathengi bethu, siya kunikela amanqanaba aphezulu ukugqwesha kwaye breadth kuwo onke zethu iindlela ezilungileyo kwaye specialties. Wethu, abaxhasi, abaninzi kubo ishishini kwaye yehlabathi iinkokeli. Ezinye ii-Ofisi: Hong Kong Umthetho Ifemi ke Isixhosa injongo Yethu kukuba anike personalized kwaye abazinikeleyo inkonzo a handful labathengi, kuquka wobulali umdla ngamazwe abaxhasi, ezifana conglomerates investing kwi-China kwaye oko kufuna uncedo ukuba lawula engqongileyo imimandla. Thina bakholelwa ezisebenzayo ngaphezu kwazo zonke ongomnye kwaye isisombululo-oriented. JAC abaqondisi-mthetho Umthetho Ifemi liquka a iqela le experienced abaqondisi-mthetho ezahlukeneyo isemthethweni imihlaba kunye nomdla kugxila corporate, ezemali, ushishino, ngamazwe ilifa ucwangciso, conveyance, usapho umthetho jikelele litigation. Sino advised kuba abaxhasi kwi-IPO u-M-A amaphulo ngokunjalo. Esekwe kwi, ONC abaqondisi-mthetho sele grown babe omnye oyena domestic Umthetho Firms kunye ngaphezu kwe- amalungu ngokusemthethweni-umntu kwaye ixhasa abasebenzi.
Similiselwe echongwe yijaji Asialaw Profiles njenge"highly elicetyiswayo"Umthetho Ifemi, kwaye ranked yi-Chambers kwaye Partners njengoko ephambili ifemi.
Kunye ngaphezu amabini anesihlanu ezimbalini, Kangda wenziwe omnye ezikhokelela ngokupheleleyo-nkonzo Umthetho Firms kwi-China. Kunye ukwanda ngamazwe urhwebo kunye intengiselwano, ukubonelelwa entrepreneurs ukusuka emzantsi Afrika Emelika kuba eqale ekumiseleni lwamashishini karhulumente kwi-China, okanye cooperating kunye Isitshayina. Waseka ngo, Dacheng Umthetho Ofisi sesinye kuqala kwaye likhulu lwahlulelwano Umthetho Firms kwi-China. Ngomhla we-ishumi Dacheng waba samkelwe ngumlawuli Beirut Kamasipala Bureau of Justice ngonovemba kwi-tshintsha yayo jikelele lwahlulelwano kwi ezikhethekileyo jikelele lwahlulelwano. Ukususela yayo oko, Dacheng sele. Morley Chow Seto yi iqela le-Hong Kong, ulwaphulo-mthetho Yokhuselo abaqondisi-mthetho kunye phezulu-tier reputation kwaye waba ukumisela isixhobo yi-partners Christopher Morley, Anita Chow kwaye Eric Seto, zontathu baba yangaphambili partners yolwaphulo-mthetho iqela le Haldanes. MCS partners kwaye iqela kuba i-ezibalaseleyo reputation. Fried, Frank, Harris, Shriver Jacobson LLP sele attorneys strategically ebekwe ehlabathini ke, inqununu-mali centers. Ifemi ke origins umhla kwi-jika ye-century, kunye enjalo predecessor firms njengoko Riegelman Bach, Riegelman Hess Strasser kwaye Strasser Spiegelberg Fried kwaye Frank. Geenen Umthetho Ofisi yindlela ephambili langaphandle isemthethweni service provider kwi-Guangzhou, China, ngokubonelela ngenkxaso elinolwazi inkonzo kubathengi bethu.
Sikholelwa umxhasi umdla ngala ngexesha kakhulu intliziyo yethu ushishino, kwaye sizama kuphunyezwe ukugqwesha kuyo yonke into senza kuba nabo.
Thina ikratshi ngokwethu njalo.
Kwi-China, rare, ulwaphulo-mthetho meko apho ubungqina wenza umahluko - comment ingxwaba Ngeposi
Юрист резюме буенча тәкъдимнәр написанию резюме
© 2021 Abaqondisi-mthetho ka-China. Zonke Isitshayina abaqondisi-mthetho kwi-intanethi.